ukunakekelwa kahle noma yisiphi isilwane yakhiwa izingxenye eziningi. Kodwa ngisho noma ungashada ayaqikelela ukuba balandele yonke izincomo bondliwe futhi isilwane imodi olunyakazisa umzimba, okuyinto, ngeshwa, akuqinisekisi impilo yayo ngokuphelele. Zonke izilwane bayagula ngezikhathi ezithile. Kungaba unhlangothi izinja onjengawe ukuhlonza kanye aphathe lokhu zokugula?
Stroke - Kuyini?
Stroke libizwa ukungakhuli okukhulu kwegazi cerebral palsy. Nge zokugula amaseli anjalo ungatholi-mpilo ngokwanele. Umbhali wayevame ukunezela lokhu yi sohlangothi iba ukwehluleka izingxenye ngabanye zobuchopho noma wonke Nenkabazwe. Lesi isifo esithinta izinzwa ukuthi kuthinta abantu kanye nezilwane eziningi. Ngezinye izikhathi unhlangothi izinja. Lokhu kusho ukuthi zonke umnikazi isilwane ezine-ezinemilenze kufanele wazi izimpawu zokuqala ezibonisa lesi sifo futhi bakwazi ukuyibona isikhathi.
akhawunti Stroke kuyinto ngokoqobo imizuzu. Ukulondoloza ngokuphila kwesilwane futhi impumelelo isimilo encike ngqo kwi amazinga usizo. Kwezokwelapha, kukhona ngezigaba eziyinkimbinkimbi izinhlobonhlobo lesi sifo. Ongelutho kuwusizo ukwazi ukuthi ukuhlukanisa ischemic futhi oluhambisana unhlangothi. Esimweni sokuqala sikhuluma ukopha ebuchosheni, okwenzeka ngenxa ukudabuka odongeni isitsha. Oluhambisana unhlangothi - a ukuvaleka imithambo yegazi.
Eqinisweni, unhlangothi izinja - isifo ingekho kaningi impela. Khomba zohlobo nge nezici ezithile ukuze lesi sifo, kunzima. Uma ukholwa ukuthi izibalo, okungenzeka kakhulu ukuba ahlupheke tilwane letinkhulu. Eqenjini zezinja engozini ngokuba kakhulu eminyakeni yokuguga.
Stroke - ukuphazamiseka zezinzwa ukuthi siyenzeka kaningi izilwane hyperexcitable wadalula ukucindezeleka njalo. Ososayensi bakholelwa ukuthi ngezinga elikhulu lokhu zokugula okusongelayo izinja abahlala emafulethini. Esinye isici ingqondo unhlangothi - khona izifo e isilwane. Ezimweni eziningi, i- ukuphazamiseka kwegazi cerebral kuholele isifo senhliziyo, izinso, isibindi, yegilo indlala. Stroke kungaba inkinga ka ingcindezi ephakeme, Cushing Syndrome kanye nesifo sikashukela.
Kungani kukhona unhlangothi izinja? Izimbangela yalesi sifo, kukhona ukuthuthukiswa eziningana. Ngokuvamile lesi sifo ikhulela ubuthi izidakamizwa noma ezinobuthi. Kwangathi futhi avuse unhlangothi kuhlasimulise okulimala ebuchosheni ebuchosheni. Lokhu zokugula sitholakale izilwane nge ngokweqile. Ngokuvamile lesi sifo singumbulali inkinga izifo zenhliziyo semithambo, ukuvuvukala e isimiso sokujikeleza kwegazi.
Ingabe ufuna ukujabulisa wena impilo isilwane nokuphila kahle? Zama ukunciphisa inani ukucindezeleka emphilweni inja, ubonane Uchwepheshe mayelana ukuqeqeshwa mode jikelele umsebenzi isilwane. Khumbula: uhlobo ngokomzimba nangokwengqondo kungase kuvuse unhlangothi.
Izimpawu of kwegazi cerebral
Wonke umnikazi kufanele sikhumbule ukuthi ngisho noma isilwane ephelele hhayi ingxenye ingozi, unhlangothi engenzeka nganoma yisiphi isikhathi. Zama ukukhumbula izimpawu eziyinhloko lesi sifo futhi ukunikeza isilwane sakho isamba elanele ukunakwa nsukuzonke. Yiziphi izimpawu unhlangothi ezinjeni zenzeka kaningi kakhulu?
Endabeni ka kuphula umthetho we-cerebral kwegazi isilwane singaziphatha ngokungathi ngobudlova, noma, kunalokho, singabi abavilaphayo futhi bayozela. Uma isilwane iziphoxi wayeka ngokuzumayo bayalalela futhi basabele iqembu aphethe - kuyinto uphawu elishaqisayo. kusebentisana kahle ukunyakaza, ukukhubazeka isikhashana esinqunyiwe kungenzeka ukubonakaliswa kwangaphandle yisifo sohlangothi. Ezinye izilwane ziye angahluleli ngendlela eqondile nomlomo (ukwephulwa umsebenzi kwemisipha) kanye nezinguquko ngobukhulu umfundi. Ezimweni ezimbi kakhulu, inja inezimpawu sohlangothi zimi kanje: ukushaya kwenhliziyo okungajwayelekile ukuphefumula, yokufikelwa kanye nokuquleka, equlekile.
Usizo lokuqala ekhaya
Kubalulekile ukuqonda ukuthi unhlangothi - lena zokugula sina, okungase kubangele ukufa. Inketho engcono aphathe ke - ngesikhathi izinsolo lokuqala wezilwane show isilwane. Uma lokhu kungeke kwenzeke, umnikazi kuyodingeka unikele usizo lokuqala kuwe. Ukuze alondoloze umsebenzi zenhliziyo inja kungenziwa unikezwe "Kordiamin" noma "Sulfokamfokain". "Mannitol" "Mannitol" noma "Furosemide" - izidakamizwa olungavimba ubuchopho ukuvuvukala. Uma uqiniseka ukuthi kwenzeka unhlangothi ischemic e izinja, ukwelashwa ekhaya ingase ihlanganise ethola "aminophylline" "Kodwa-spa", "Papaverine".
Ungabi kunengise Ezimweni ezinjalo, kanye Antioxidants, isibonelo, ayinangozi eziningi zazo - ascorbic acid. Lapho kungenzeka Ukudlikizela inikezwe "Seduxen" noma "i". Kodwa nokho, uma kungenzeka, ngaphambi kokuba baqale ukwelashwa, kuyancomeka ukuba uthintane (siqala ukude) nge wezilwane. Khumbula ukuthi kubalulekile ukubala umthamo umuthi lomisiwe ngamunye, kuncike isisindo sesilwane.
Stroke enezinto eziningi izimpawu ehluke kakhulu. Nge ekhaya wokuhlola isilwane engiwenzayo uhlale kungenzeka uphethwe ayilungile. Esikhathini nomtholampilo wezilwane ngaphambi ukuqokwa ukuphathwa lohleliwe, udokotela uqhuba hhayi kuphela ezibukwayo futhi zezinzwa luhlolo caudate nesineke, kodwa futhi aqoke inani lezifundo. Stroke ngomshini ukuhlolwa kwegazi kanye nomchamo, ultrasound besisu, ukuhlaziya cerebrospinal fluid, ingqondo i-MRI. Kuye uphawu kungase kukhethwe kwabanye enye yalezi izifundo, noma konke ngesikhathi esisodwa.
Uma uhlelo ukusazi ngokunembile isifo esikuphethe nokuhlolwa iziguli udokotela ekunika imithi. Okunzima kakhulu kubhekwa nezinsuku zokuqala ezingu-3-5 ngemuva unhlangothi. Izibalo scary, kodwa ngalesi sikhathi ematfuba yokufa 50%. Uma kudingekile, udorhodera ungashiya inja esibhedlela emtholampilo nokuqapha okuqhubekayo kanye nokwelashwa okusebenza kangcono. ukwelashwa njalo izinsuku 10-15, phakathi kwesikhathi lapho isilwane kumele zihlolwe njalo udokotela. Ngalesi sikhathi isiguli uyaqhubeka ukuthola imithi, ukuphumula Kunconywa futhi Physiotherapy Ukudla. Ezimweni ezimbi kakhulu, inja ngemva kokushaywa unhlangothi ingathola imithi futhi ngaphansi kokuqondisa izinyanga eziyisithupha.
Ukuvuselelwa ngemva izingozi cerebrovascular
Lapho sebephothulile yokwelapha olunzulu umiselwa ukwelashwa okubuyisela. Ngokusho izinkomba ngabanye, imikhiqizo emisha ezithaka imithi kuyabekwa. Ngokuvamile nootropics nezidakamizwa zenhliziyo, amaphilisi engabelwe umfutho wegazi ophakeme, normalizing blood pressure. Stroke e Izinja Ukwelashwa kuhilela eside, wokubuyiselwa egcwele isilwane nokuqeda Ukuphinda okungenzeka.
Isikhathi ukuvuselelwa kuwusizo uhlikihla, ukuze bagcine ukuphila kwansuku zonke futhi umsebenzi isilwane ngokomzimba. Ukudla ebekiwe ngamunye, izimiso eziyisisekelo esikudlayo - inani elikhulu ukudla, ukushintshela ku ukudla okuwuketshezi futhi-semi okusamanzi (ukudla okusemathinini, ukudla elina broths). Ukuze kwelulama kufanele kube ukuvikela isilwane kusuka kunoma iyiphi ukucindezeleka futhi ukushaqeka sezinzwa.
Qaphelisisani zonke lezi zincomo egazini kubaluleke njengokugwema ikhambi unhlangothi inja kahle. Izimpawu Izimpawu zokuqala zesifo zokugula kumele ufunde yonke umnikazi inja. Phela, ngokushesha kuzoqalwa ukwelashwa okufanele, aba maningi amathuba ukuba babuyele ngokugcwele isilwane.
Handler - kuyinto umsizi for embukisweni
Jigsaw Electric okuyinto engcono? Izibuyekezo. Kuhle-jigsaw kagesi
"Opel Ampere" - model-mbuso ka-ophethe "kusukela izisekelo"
Indlela ukupheka Czech amadombolo: iresiphi for the iresiphi